Maxkamad ku taal Masar oo xukun ku riday wasiirkii hore ee dalxiiska dalka Masar – SBC
Maxkamad ku taal Masar oo xukun ku riday wasiirkii hore ee dalxiiska dalka Masar
Cairo: – Maxkamad ku taala Dalka Masar ayaa 5 sano oo xarig ah ku xukuntay wasiirkii hore ee dalxiiska dalkaas ninka lagu magacaabo Suheyr Garaana oo lagu eedeeyay in uu lunsaday hantida qaranka dalka Masar islamarkaana ogolaansho si sharci dara ah ku siiyey shirkado si gaar ah loo leeyahay.
Xariga wasiirka ayaa daba jooga baaritaano maamulka cusub ee dalka Masar uu ku hayo wasiiradii hore ee xilalka ka soo qabtay maamulkii uu madaxda ka ahaa xusni Mubaarak.
Dabayaaqadii toddobaadkan ayey ahayd markii ay maxakamad ku taal dalka Masar ay xabsi 12 sano oo xariga ah ku xukuntay Wasiirkii hore ee arimaha gudaha ee dalka masar Xabiib Alcaadili kaasi oo muddo ku xernaa xabsi kuyaal magaalada Qaahira ee xarunta dalka masar.
Qaar kamid ah Wasiiradii hore ee xilalka ka soo qabtay maamulkii uu madaxda ka ahaa madaxweynihii hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak ayaa xabsi kujira oo aan wali lagu soo oogin danbi .
Dhanka kale Sida ay baahisay wakaalada wararka Bariga dhexe waxaa xabsiga la dhigay madaxweynihii hore ee dalkaasi Masar Xusni Mubarak kadib amar ka soo baxay xafiiska xeer ilaaiyaha guud ee dalka Masar C/majiid Maxamuud.
Xeer ilaaiyaha ayaa amray in mudo 15-casho ah xabsiga lagu sii hayo madaxweynihii hore ee dalkaas si loo baaro arrimo ay ka mid yihiin masuq-maasuq, si xun u adeegsi awooda dalka xilligii uu talada hayay iyo dambiyo kale.
Xukuumada cusub ee dalka masar ayaa si aad ah u dar dargalisay wax kaqabashada arimaha bulshada iyo amaanka dalka masar iyadoo dhanka kalana kawada dabalgalka mas’uuliyiintii sar sare ee xilalka ka soo qabtay maamulki hore kuwaasi oo lagu soo eedeyay falal ay kamid yihiin musuqmaasuq, iyo bixinta amaro lagu laayay dadkii dibad baxa sameynayay ee aksoo horjeeday xukuumaddii Mubarak.